China 100% Carbon eriri telescopic pole multifunction pole emepụta na suppliers | Lanbao
Nke a na telescopic mkpanaka mere nke 100% carbon eriri maka elu ikwesi olu ike, ìhè arọ, eyi na corrosion eguzogide. Mkpanaka telescopic nwere ngalaba atọ, na usoro mgbanwe nke mkpọchi ahụ na-enye onye ọrụ ohere ịgbanwe ogologo ya kpamkpam.
Ogwe osisi carbon ndị a na-adọrọ adọrọ na-amịghị mgbalị ọ bụla ma nwee ike igbachi n'ogologo ọ bụla site na 110cm ruo 300cm, nke dị mma maka ngwa ọ bụla ebe kọmpat nchekwa na ogologo mgbatị dị mkpa. Mkpanaka ndị a dị mfe iji rụọ ọrụ ma buru. Enwere ike ịgbatị ha n'ogologo kachasị na sekọnd site na ịpụpụta na ịkpọchi ngalaba nke telescoping ọ bụla.
Enwere ike iji mkpara telescopic a n'ụlọ iji hichaa Windows ma hichaa ogwe igwe. Mkpanaka a na-adọghachi na-enye mma maka nhicha site n'ebe dị anya. Njehie ergonomic na-eme ka nhicha dị ogologo karịa nchekwa na nchekwa.
Anyị nwere otu ndị injinia nwere afọ iri na ise nke ahụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ carbon fiber. Dịka ụlọ ọrụ dị afọ iri na abụọ, anyị na-ahụ nyocha nke nyocha dị n'ime, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwekwara ike ịnye nyocha nke ndị ọzọ. A na-eme usoro anyị niile n'ụzọ kwekọrọ na ISO 9001. Ndị otu anyị na-anya isi na ọrụ eziokwu na nke ọma anyị, na-anapụta ndị ahịa kacha mma mgbe niile.
Aha 100% Carbon eriri telescopic osisi multifunction osisi
Telescopic osisi 6-60 mm 0,5,0.75,1 / 1.5,2,3,4 mm 10Ft-72ft
2. Nhicha Ngwá Ọrụ, Ime ụlọ ọcha, Outrigger, Ogwe igwefoto, onye na-atụtụ
Na a ọkọlọtọ kpochidoro cone na eluigwe na ala eri, ndị a okporo osisi na-arụ ọrụ niile Unger Mgbakwụnye na ihe ọ bụla Mgbakwụnye na a eluigwe na ala eri. Mgbe i jikọtara squeegee, scrubber, brush or duster na otu ogwe osisi anyị, ị nwere ike ihicha ebe ndị siri ike iru na ngwa ngwa karịa karịa karịa iji ihe aka na ubube dị ọcha. Mgbe ọ bụla e nwere mkpa maka ogologo ịgbatị, ma n'ime ma ọ bụ n'èzí.
Nke gara aga: 45Ft ngwakọ ihe telescopic osisi
Osote: Carbon fiber tube nwere ogologo ogologo, ogologo nwere ike ahaziri
Faiba glaasi Telescopic osisi
Glass Fiber Telescopic osisi
Telescopic Window nhicha osisi